Milaza Amin’ireo Mpiserasera Aterineto Mba Tsy Hanjohy Ireo Mpitsikera Ny Fitondrana Miaramila Ao Amin’ny Media sosialy i Thailandy — Raha Tsy Izany Hiatrika Ny Vokany · Global Voices teny Malagasy
Milaza Amin'ireo Mpiserasera Aterineto Mba Tsy Hanjohy Ireo Mpitsikera Ny Fitondrana Miaramila Ao Amin'ny Media sosialy i Thailandy — Raha Tsy Izany Hiatrika Ny Vokany
Voadika ny 24 Avrily 2017 15:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, English
Ankavia miankavanana: Andrew MacGregor Marshall, Dr Pavin Chachavalpongpun, ary Dr Somsak Jiamtheerasakul.
Milaza amin'ireo olom-pirenena Thailandey ny Minisiteran'ny Toekarena sy ny Fiarahamonina Nomerika ao Thailand mba hanaisotra tsy ho namana sy tsy hanjohy ireo mpitsikera telo ny governemanta, raha tsy izany mety voampanga ho manitsakitsaka ny Lalàna momba ny Heloka Bevava Amin'ny Solosaina nivoaka tamin'ny taona 2007 izy ireo.
Tamin'ny fanambarana ho an'ny vahoaka tamin'ny 12 Aprily 2017, nandrisika ireo mpiserasera aterineto Thailandey ny Minisitry ny Toe-karena sy Fiarahamonina Nomerika (MDES) mba hijanona amin'ny fanarahana sy fizarana ireo lahatsoratra avy amin'ny kaonty media sosialy an'ireo mpitsikera telo monina ampitan-dranomasina izay mitsikera ny fitondrana tohanan'ny miaramila: Dr. Somsak Jiamtheerasakul , Dr. Pavin Chachavalpongpun, ary Andrew MacGregor Marshall.
Mpahay tantara nampianatra tao amin'ny onivesite Thammasat ao Bangkok nandritra ny roapolo taona mandra-pandroahana azy noho ny fanakianana ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 izay nitondra ho amin'ny fisian'ny governemanta eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao i Somsak. Mpampianatra monina ao Japana kosa i Pavin. Mpitati-baovaon'ny Reuters nonina tao Bangkok taloha kosa i Marshall, izay voaràra tao Thailandy tamin'ny taona 2011 ny bokiny momba ny fitondram-panjaka tokana Thailandey. Ankoatra ny maha mpitsikera ny governemanta Thailandey azy ireo, voampanga ho manitsakitsaka ny Lalànan'ny Lese Majeste (Lalànan'ny Fanevatevana ny Mpanjaka) ihany koa izy rehetra ireo. Nandao an'i Thailandy izy rehetra mba hialana amin'ny fanenjehana ara-politika.
Ity ambany ity ny ampahany amin'ny dikan-teny tsy ofisialy ny taratasy navoakan'ny MDES:
Mba hahazoana antoka fa tsy nanao fandikan-dalàna (fanahy iniana na tsy nahy) mifandray amin'ny Lalànan'ny Solosaina eto Thailandy/Lalànan'ny Heloka Bevava (2007), namporisihana ny olom-pirenena Thailandey mba tsy hanaraka, hifandray, na hizara (mivantana na ankolaka) ny votoaty alefan'ireo olona voalaza eto ambany ao amin'ny aterineto sy ny fampitam-baovao sosialy.
Taratasy navoakan'ny Minisiteran'ny Toekarena sy Fiarahamonina Nomerika ao Thailandy. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'i Andrew MacGregor Marshall
Naka fahefana an-keriny tamin'ny taona 2014 ny tafika ary mbola manjaka any anaty birao amin'ny alalan'ny Lalàm-panorenana novolavolainy tamin'ny taona 2016. Nametraka fitsipika hentitra momba ny haino aman-jery ankoatra ny fampiharana an-kerisetra ny Lalànan'ny Lese Majeste efa misy, izay heverin'ireo mpandalina sasany fa natao hampanginana ny mpanohitra sy ny mpitsikera ny fitondrana miaramila.
Ezaka farany nataon'ny mpanongam-panjakana mba hifehezana ny haino aman-jery sy hampitahorana ireo mpanakiana ny taratasin'ny MDES. Efa “nanasa” ireo mpanao gazety sy mpikatroka izy teo aloha mba hanatrika ny “fampianarana fanitsiana toe-tsaina” tany amin'ny toby miaramila. Nanagadra mpikatroka noho ny fizarana ny lahatsoratry BBC miresaka mombamomba ny mpanjaka vaovao ao amin'ny firenena.
Tsy manazava ny antony ny taratasy hoe nahoana no heloka bevava ny manaraka, mifandray, sy mizara ny kaonty media sosialin'i Somsak, Pavin ary Marshall. Tsy mamaritra izay lazaina fa heloka bevava nataon'ireo mpitsikera an-tsesitany ihany koa ny taratasy.
Mba hisorohana ny olana ara-pitsarana tsy misy fotony ho an'ireo mpanjohy azy, nandrisika ireo namany Thailandey avy hatrany mba tsy hanaraka azy ao amin'ny Facebook i Marshall:
Te-hangataka amin'ny rehetra izay mety ho tandindomin-doza aho mba tsy hanaraka ahy avy hatrany sy hitandrina mafy amin'ny fanehoan-kevitra na fizarana ny lahatsoratro.
Mbola afaka mamaky ny pejiko Facebook ianao na dia tsy manjohy ahy aza.
Didy mampihomehy sy mangeja izany saingy tsy tiako ho lasibatra ny olona tsy manan-tsiny noho ny fanarahan'izy ireo fotsiny ny asako amin'ny fanaovan-gazety.
Nampahatsiahy ny manampahefana Thailandey ihany koa izy fa “tsy misy olona mandresy velively amin'ny fiezahana hanafoana ny marina”:
Tsy dia manam-pahaizana loatra momba an'i Thailandy noho i Ajarn Somsak sy Ajarn Pavin aho. Mpanao gazety farang [vahiny] fotsiny manao izay azoko atao mba hitatitra ny marina aho, satria mino aho fa mendrika hahafantatra izay tena mitranga ny Thailandey, fa tsy lainga sy fampielezan-kevitra. Marani-tsaina ny vahoaka Thailandey ka mahafantatra ny tenan'izy ireo sy manapa-kevitra izay marina sy ny tsy marina. Tsy misy olona mandresy velively amin'ny fiezahana hanafoana ny marina.
Nanoratra i Pavin fa nanombatombana ny fetran'ny fitsipika ao amin'ny anjerimanontolo izy sy ny mpiara-miasa aminy:
Nanontany ahy ireo mpampianatra sy mpianatra sasany ao amin'ny Kyodai androany maraina, raha tsy ara-dalàna ny mifandray amiko amin'ny alalan'ny FB sy mandefa asa ho ahy ao amin'ny mailako, hatramin'ny nampitandreman'ny manampahefana Thailandey fa mety ho voampanga izay manao izany….
Raha tokony hampihena ny isan'ireo mpanjohy an'ireo mpitsikera telo ao amin'ny aterineto izany, dia vokatra tsy ampoizina fitomboan'ny lazan'ireo kaonty media sosialy voaràra no naterak'izany. Nanoratra i Marshall fa efa nahazo mpanjohy fanampiny miisa 700 tao amin'ny Facebook izay hatramin'ny namoahan'ny fitondrana miaramila ny taratasy:
Ny fiovana mazava tao amin'ny tambajotra Facebook-ko hatramin'ny nilazan'ny fitondrana miaramila tamin'ny vahoaka mba tsy hifandray amiko amin'ny media sosialy dia nitombo 700 ny isan'ny mpanjohy ahy
Namazivazy ny taratasy sy ny fiantraikany nahatonga ireo mpitsikera malaza kokoa ao anatiny sy ivelan'i Thailandy ity sariitatra ity:
Endrika nohatsaraina ho an'ny ampitson'ny FIRENENA – Mitandrema amin'ny traika Streisand
Na dia eo aza ny hadalàna tamin'ny fandraràna napetraky ny fitondrana miaramila, tsy vazivazy mihitsy ny fiantraikany ara-politika. Nampitandrina ny Fikambanamben'ny gazety ao Azia Atsimo Atsinanana fa “mikasa hametra ny safidin'ny olona, sy hanindry ny fitondran-tenan'izy ireo amin'ny fampitahorana amin'ny fandikan-dalàna” ny taratasy.
Nandrisika ny fikambanana iraisam-pirenena mba hijery ny olana i Jaran Ditapichai, vaomieran'ny Zon'olombelona Thailandey teo aloha izay nandositra ny firenena ihany koa rehefa nampangaina tamin'ny Lese Majeste:
Tsy vitany manitsakitsaka ny zon'olombelona, ​​indrindra ny fahalalahana miteny sy ny zo hifandray ihany ity didy ity, fa misy fiantraikany amin'ny olom-pirenena Thailandey ihany koa. Mandrisika ny fikambanana iraisampirenena sy ny ao an-toerana mpiaro ny zon'olombelona aho mba hanadihady ny fanamparam-pahefana ataon'ny fitondrana miaramila Thailandey.
Nitsikera ny taratasin'ny MDES ihany koa ny Amnesty International:
Niroboka lalindalina kokoa ny manampahefana Thailandey tamin'ny famerana ny fahalalahana miteny ho an'ny vahoaka. Taorian'ny fanagadrana olona noho ny zavatra lazain'izy ireo anaty aterineto sy ivelan'ny aterineto, sy ny fanenjehana ireo mpitsikera an-tsesintany, te hanapaka ny fifandraisan'ny olona izy ireo
Mandritra izany fotoana izany, voalaza fa nandidy ireo minisitry ny governemanta mba hanenjika ireo mpiserasera any amin'ny firenen-kafa izay matetika “manevateva” ny fianakavian'ny mpanjaka ny praiminisitra ao amin'ny firenena.
Hong Kong (Shina) 6 andro izay